प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासको अवमूल्यन गर्नुभयो – नेता महत
By vijayafm on	 March 30, 2019 देश, फोटो फिचर, विविध खबर, स्थानीय
चितवन, १६ चैत । प्रधानमन्त्रि केपीशर्मा ओलीले नेपाली काँग्रेस खुम्चिएको भन्दै गरेको टिप्पणीप्रति नेपाली काग्रेसका सह महामन्त्रि डा. प्रकाश शरण महतले आपत्ति जनाउनुभएको छ । ईतिहासको अवमुल्यन गरिएको भन्दै नेता महतले काँग्रेसको ईतिहास मेट्ने दिवा स्वप्ननदेख्न सुझाव दिनुभएको छ । राजनैतिक स्वार्थका लागी बामएकता गरेर कम्यूनिष्टको जित क्षणिक भएको टिम्पणी गर्नुभयो । काँग्रेस पराजितभएपनिकमजोर नभएको स्पष्ट पारेका छन । नेपाल महिला संघ चितवनले पश्चिम चितवनको चनौलीमा गरेको शोक सभामा बोल्दै सहमहामन्त्रि डा. महतले काग्रेस कसैले सकेर नसकिने बताउनुभयो ।
शोक सभामा जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको सहभागीता रहेको थियो । महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष उमा रेग्मीको बुवा खडानन्द रेग्मीको निधनको १३ औं दिनको पुण्य तिथीमा महिला संघले चितवनले शोक सभाको अयोजना गरेको हो । शुक्रवार विहान समवेदना प्रकट गर्नका लागी नेपाली काग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि रेग्मी निवास पुग्नुभएको थियो ।